Nnakọta Arịa Phan mkpokọta sitere n'ike mmụọ nsọ akpa Phan nke bụ ọdịbendị akpa Thai. Onye rụrụ ya na-eji ihe eji arụ ọrụ Phan mee ụlọ nke na-eme ka ọ sie ike. Chepụta ụdị ahụ na nkọwapụta ya na-eme ka ọ dị ugbu a ma dị nfe. Onye rụpụtara eji teknụzụ laser na igwe na - ejikọ aka na igwe CNC maka imepụta nkọwa dị mgbagwoju anya na nke dị iche karịa ndị ọzọ. E jiriwo usoro kpuchie elu ahụ kpuchie elu ahụ, ka ọ dị ike ma nwee ọkụ.
Mpịachi Oche Ka ọ na-erule 2050 ụzọ abụọ n'ime ụzọ atọ nke ụwa ga-ebi n'obodo. Ebumnuche bụ isi na-akwado Tatamu bụ inye ndị chọrọ ohere maka ndị nwere ohere ha pere mpe, gụnyere ndị na-agakarị. Ebumnuche bụ ịmepụta arịa ụlọ nke ga - ejikọ aka siri ike na ọdịdị dị oke mkpa. Ọ na-ewe naanị otu mkpaghari ije iji dọrọ oche. Ọ bụ ezie na ugbụ a niile eji akwa dịgide na-eme ka ọ dị arọ, akụkụ ndị e ji osisi rụọ na-akwụsi ike. Ozugbo etinye ya nrụgide na ya, oche ahụ na-esikwu ike ka ibe ya na-emechi ọnụ, n'ihi usoro na geometry ya pụrụ iche.
Oche Haleiwa na-akwa akwa rattan na -eme ka ọ bụrụ nke na-ekpocha ma na-etinye silhouette dị iche. Ngwa ihe eji eme ihe na-asọpụrụ ọdịnala nka na Filipaị, na-emezigharị ugbu a. Ejikọtara, ma ọ bụ jiri ya dị ka mpempe nkwupụta, ọdịdị nke ọdịdị ahụ na-eme ka oche a kwekọọ n'ụdị dị iche iche. Creatmepụta nguzozi n'etiti ụdị na ọrụ, amara na ike, ije na imewe, Haleiwa dị mma dịka ọ mara mma.
Oriọna Ọrụ Pluto na-eme ka elekwasị anya na ụdị. Ihe mejupụtara ya, cylinder aerodynamic na-eji aka mara mma ọ bụla etinyere na ntọala okirikiri dị warara, na-eme ka ọ dịkwuo mfe idowe ọkụ ya dị nro-dị mfe. Wasdị ya sitere na telescopes, mana, ọ na-achọ ilekwasị anya n'ụwa karịa nke kpakpando. Emere site na iji mpempe akwụkwọ 3d na-eji plasta eme ọka, ọ bụ ihe pụrụ iche, ọ bụghị naanị maka iji 3d ndị na-ebi akwụkwọ na ụdị ụlọ ọrụ, kamakwa ọ dị mma gburugburu.
Oriọna Mgbanaka Mobius na-enye mmụọ nsọ maka okike nke oriọna Mobius. Otu eriri oriọna nwere ike inwe ihu abụọ (ya bụ, ihu abụọ), ihe dị n'akụkụ na nke ga - eme ka afọ ju ọkụ. Specialdị ya pụrụ iche ma dị mfe nwere njiri mgbakọ na mwepụ omimi. Ya mere, a ga-eburu mma na-egbu egbu na ndụ ụlọ.
Karama Mmiri Silicone Aquarius nwere obi ụtọ bụ karama mmiri a na-ejigide echekwa ma dị mma maka afọ niile. Ọ nwere ụdị iberibe ọmarịcha ọnụ ọchị a haziri nke na ejiri anya nwere agba abụọ na-egosipụta ọhụụ, na-egosi mmetụta nke ndị na-eto eto, gbasiri ike na nke ejiji. Emere ya na silicone nke 100% na-enwe ike ịmegharị nri, na -agide ogo bekee dị 220 deg. C ka -40 deg. C, enweghi plasticizer leputara ma nwekwaa BPA. Igwe mmetụ ahụ dị nro na-enye ọnya silky, ọ dị mma ijide ma jide ya. Oge opupu ihe ubi, ịdị nkọ na njiri mara oghere na-eme ka karama ahụ rụọ ọrụ na-arụ ọrụ dị ka griiz aka na aka.
Nnakọta Arịa Mpịachi Oche Oche Oriọna Ọrụ Oriọna Karama Mmiri Silicone